INingizimu Afrika inama holide omphakathi ayi-12 asemthethweni agujwa minyaka yonke. Nangesikhathi sobandlululo kukhona amaholide akade egujwa aphinde aqhubeka ukuthi agujwe emva konyaka we-1994, amaningi ayegujwa ngalesi sikhathi achithwa wonke. Iningi lamaholide agujwa eNingizimu Afrika aba semthethweni emva konyaka we-1994 ngenkathi iNingzimu Afrika ithola Inkululeko. Amaholide amaningi aseNingizimu Afrika aqala ukugujwa emva konyaka we-1995 ngesikhathi Umthetho Sivivinywa Wamaholide Omphakathi uvunyelwa uPhalamende ngonyaka we-1995. Uhlu lwamholide omphakathi agujwa eNingizimu Afrika.
Inkhohlakalo kwezezimali eNingizimu Afrika ibandakanya ukusetshenziswa kwemithombo nezimali zesizwe ukuzuzisa abantu ngasese, ukufumbathisa nokuzibonelela ngasese. I-Transparency International Corrupt Perceptions Index yango 2017 inikeze iNingizimu Afrika inkomba yama-43 kwizinkomba ezingu-100, eNingizimu Afrika lokhu okubeka iNingizimu Afrika emkhakheni ka 71 emazweni angama 180. Lesi simo simele ushintsho lokwehlela ezansi ngamaphoyinti amabili ukusuka ku 45. Amazwe anamazinga angaphansi kwama 50 akhombisa ukuba nezinkinga ezinkulu zenkohlakalo kwezezimali. Ihlazo lakamuva elenzeka kusuk ...
Umongameli waseNingizimu Afrika manje nguCyril Ramaphosa. Omongameli bangaphambilini nguNelson Mandela, Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe kanye noJacob Zuma. Omongameli abake babamba isikhashana nguMangosuthu Buthelezi, Ivy Florence Matsepe-Casaburri.
. i-African National Congress iANC yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika elasungulwa yizingqalabutho ezinjengo John Langalibalele Dube umafukuzela owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we-1912, kanti ngemva kwalokho kwalandela uPixley ka Isaka Seme,Inkosi uAlbert Lutuli nabanye. futhi inhlangano ubuzwemnyama. Njengoba zazivinjelwe eNingizimu uhulumeni 1960-90, I-ANC yanqoba.
ICongress of South African Trade Unions ngamafuphi iCOSATU yinhlangano enkulu yabasebenzi eNingizimu Afrika eyasungulwa ngonyaka we-1985. Lenhlangano imele abasebenzi abayi-1.8 million, ibuye ibe nezinhlano zabasebenzi ezingama-21 ngaphansi kwayo. ICOSATU ibuye ibe nobuhlobo neqembu lezombusazwe iANC kanye neqembu lakhomanisi i South African Commmunist Party.
I-Cannabis yaseNingizimu Afrika igunyazwe yiNkantolo Yomthethosisekelo wezwe ukuthi isetshenziswe ngabantu abadala ngasese. Kodwa-ke, imithetho eyenqabela ukusetshenziswa ngaphandle kwendawo yokuhlala yomuntu yangasese nokuthenga nokuthengisa i-cannabis isahleli. Njengoba imithethonqubo emelene nokuthengwa kwemikhiqizo equkethe i-cannabis isaqhubeka ukusebenza, kubuye kungacaci ukuthi lesi sinqumo singasebenza kanjani. Ngaphambi kokuthi kuvinjelwe ukwenqatshelwa kwesitshalo ngo-2018 abameli babecindezela uhulumende ukuthi aguqule imithetho yawo, eyayiqale yavimbela i-cannabis ngo-1922, uku ...
ICulo leSizwe lingaphambaniswa noNkosi Sikelel iAfrika Iculo leSizwe lase-Riphabliki yaseNingizimu Afrika. Izwe laseNingizimu Afrika selibe namaculo eziswe amaningana selokhu labunjwa ngonyaka wezi-1910 lapho lalabizwa khona ngeNyunyana yaseNingizimu Afrika. Kusukela ngalesi sikhathi lelizwe libe nezinguquko ezinigi kwezombuszwe okuholelein ukuthi icilo lesizwe lishintshe. Iculo lesizwe elisebenza manje libhalwe ngu-Enoch Sontonga 1897 u-C.J. Langenhoven 1918 kanye no-Marthinus de Villiers 1921.
Isikhumbuzo seNkosi uShaka yindawo eyifa esesifundazweni saKwaZulu-Natali eNingizimu Afrika. Kulendawo yilapho kulele khona Ilembe Eleqa Amanye Amalembe Inkosi Yesizwe samaZulu uShaka kaSenazangakhona maduzane nendawo lapho abulawo khona ngabofowabo okwakungu Dingane kanye noMhlangana. Bambulalela endaweni yakwaDukuza mhla zingama-22 kuMandulo we-1828 ehlezi edwaleni. Lelitshe lesikhumbuzo lakhiwa endaweni yase Newcastle lamiswa ngonyaka we-1932 eduze nedlinza lakhe uShaka. Ngaphambi kweNkululeko eNingizimu Afrika Usuku Lwamagugu labe laziwa njengeShaka Day eNatali lapho kwabe kubungazwa k ...
Izikhothane yigama lesisZulu elamaqembu abantu abavame ukutholaka emalokishini ase Ningizimu Africa abathanda ukuzibonakalisa ngokomnotho wabo phambi kwabantu. Embuthanweni efana neye mingcwabo, imishado noma emicimbini ethize ehlelwe yizona Izikhothane, la okwenziwa imincintiswano yokubonakalisa iminotho yazo lezo Izikhothane. Iminotho lena kusuke ku ngama cellphone, imali, izimpahla noma ugologo. Isikhothane esingene kulo mncintiswano singathatha izicathulo zaso ezibizayo siziphonsele emlilweni. Leso Sikhothane siyobe sikhombisa ukuthi asinandaba nazo lezo zicathulo ngoba phela sona sine ...
iRandi iyimali weRiphabliki waseNingizimu Afrika inophawu: R ; ikhodi: ZAR. Ikhodi lalo i-ZAR lisuselwa olimini lwesiDashi iRandi laseNingizimu Afrika ngesiZulu. IRandi libuye lisbthsnziswe kulamazwe eLesotho, eSwazini kanye nase Namibhiya yize nwo lamzawe enayo imali ayisebenzisa ekhaya. Igama elithi iRandi lisuselwa egameni Witwaters rand. Liqanjwe ngaleli landawo esGoli lapho kutholakal khona igolide eliningi kunazo zonke izindawo eNginizimu Afrika. IRandi laqala ukusethsenziswa ngonyaka we-1961 mhla zi-14 kuNhlolnalanja sekusele izninyangana kubunjwe iRiphabliki yaseNingizimu Afrika. L ...
Uhlelo lobandlululo, olwaziwa ngolimi lwesiBhunu ngokuthi yi -apartheid, okuyigama elisho "isimo sokwehlukanisa", kwakuwuhlelo lokwehlukanisa izakhamizi zaseNingizimu Afrika ngokobuhlanga. Lokhu kwakwenziwa ngamandla emithetho ye National Party, okwakuyiyona eyayibusa ukusuka nge-1948 ukuya nge-1994. Ngaphansi kohlelo lobandlululo, amalungelo, izinhlangano kanye nokunyakaza kwazakhamizi eziningi ezimpisholo nezinye izinhlanga kwancishiswa kwasekuthi umbuso wedlanzana lamaBhunu kwabayiwona osimamiswayo. Umbuso wobandululo waqala ngemuva kwempi yesibili yomhlaba yiNational Party eyayiholwa n ...
Lolu uhlu lwamaqembu ezombusazwe eNingizimu Afrika. INingizimu Afrika ingumbuso wentando yeningi, okusho ukuthi zonke izakhamizi ezivunyelwe ukuvota zinamndla okukhetha iqembu lezombusazwe elingahola isizwe. Iqembu lezombusazwe elibusayo: i-African National Congress.
i Umlando we-African National Congress, yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika, uqala nabasunguli bawo John Langalibalele Dube owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we-1912, kanti ngemva kwalokho kwalandela uPixley ka Isaka Seme,Inkosi uAlbert Lutuli nabanye. futhi inhlangano ubuzwemnyama. Njengoba zazivinjelwe eNingizimu uhulumeni 1960-90, I-ANC yanqoba. Ngeminyaka yo-1960 abaholi bayo badingiswa kanti abanye babo babanjwa bagqunywa ejele iminyaka eminingi, okubalwa o-Oliver Tambo noNelson Mandela kanye nabanye, kanti nalo leli qembu lamiswa ukuba lingabe lisaqhubeka nemisebenzi yalo, l ...
Uphiko lweziLimi kuZweIonke lugqugquzela futhi lwenza lula ukuxoxisana ngezilimi ezahlukene. Ekuzameni ukuhambisana nokushiwo uMthethosisekelo i-NLS ilawula ukwehlukahluka kwezilimi emphakathini wethu futhi kuwumthwalo wayo ukwakha ubudlelwano kuzo zonke izilimi zabantu bakuleli ngokusebenzisa lokho okushiwo yinqubomgomo ngenhloso yokuthi kugqugquzelwe ukusentshenziswa kwalezi zilimi, kanye nazo zonke izilimi ebezinganakiwe emlandweni wakuleli. Kwalezi silimi ngenhloso ezahlukene ilawula kwezilimi nemikhankaso izidingongqangi AmaZulu ongumongo wakuleli. Umsebenzi ongumongo we-NLS ukugcina ...
iNingizimu Afrika iyizwe elisezansi ezwenikazi lase - Afrika yaziwa ngokusemthethweni ngokuthi iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika Ihlanganiswa amakhilomitha
INingizimu Afrika yakhiwe yizifundazwe eziyisishiyagalolunye. Census 2011: Census in brief PDF Pretoria: Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885
INingizimu Sudan yizwe lase - Afrika Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia: ngokuyikhulisa.
Khayelitsha iyisifundazwe esikhulu saseKapa, iNingizimu Afrika Main Place Khayelitsha Census 2011.
Gugulethu iyisifundazwe esikhulu saseKapa, iNingizimu Afrika Main Place Gugulethu Census 2011.
Mitchells Plain iyisifundazwe esikhulu saseKapa, iNingizimu Afrika Main Place Mitchells Plain Census 2011.
iNingizimu Afrika linezilimi eziyishumi nanye ngamandla esikhundla. Zingu: isiZulu isiXhosa isiBhunu isiSuthu isiNgisi isiNdebele isiSwazi isiVenda isiSuthu
le - Football Association eNingizimu Afrika ezobizwa ngokuthi iNingizimu Afrika Yenhlangano Yenhlangano Yebhola YaseNingizimu Afrika futhi iyinhlangano yesibili
ISudan yizwe lase Afrika lezwe linemingcele ne Gibhithe, I - Itiyopiya, I - Eritrea, iNingizimu Sudan, i - Central African Republic, iTshedi kanye ne Libhiya
INingizimu Afrika inama holide omphakathi ayi - 12 asemthethweni agujwa minyaka yonke. Nangesikhathi sobandlululo kukhona amaholide akade egujwa aphinde